ग्लासियर कलेज कक्षा ११ मा अध्ययनरत गजेन्द्र बर्देवाको पनि स्केटमा रुचि भएकै कारण दिनमा दुई घन्टा स्केट खेल अभ्यासमा समय दिन्छन् ।सन्दीप र गजेन्द्र मात्रै होइन, पछिल्लो समय स्कुल र क्याम्पस पढ्ने अधिकांश युवाको रुचिमा पर्न थालेको छ, स्केट खेल । यसमा पनि फुटबल र क्रिकेटलगायत खेलमा जस्तै नेपाली युवाको क्रेज बढ्दो छ । स्केटलाई अमेरिका, अस्टेलियासहित युरोपेली मुलुकमा साहसिक खेलका रूपमा खेलिन्छ । केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा स्केट खेलबारे नकारात्मक धारणा थियो । अहिले भने यो खेलप्रति सकारात्मक धारणा विकास भएको छ ।यो खेलमा नयाँ पुस्ताले सक्रियता देखाएको परिवर्तनका लागि युवा नामक संस्थाका अध्यक्ष जागृत पहाडी बताउँछन् । यो संस्थाले स्केट खेलको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहन गर्ने गर्छ । यही उद्देश्यले चार वर्षअघि संस्था स्थापना गरिएको हो।
संस्थाले स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न जिल्लाका विद्यालय तथा क्याम्पसमा स्केट खेलबारे गोष्ठी, स्केट खेल प्रतियोगिता तथा स्केट खेलबारे चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो खेललाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले नेपाल स्केटिङ तथा स्केट एसोसिएसन समेत गठन गरेको छ । यसलाई पनि अन्य खेललाई जस्तै सकारात्मक ढंगबाट महत्व दिँदै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने स्केट खेलाडीको माग छ ।
– (रासस) सुशील दर्नाल
प्रकाशित : सोमबार, फागुन ०७, २०७४१२:०६
नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोज्यो, क्रिकेटमा इतिहास कायम गर्ने मौका !
युवा तीब्र गतिका बलरका लागि पीपीएल फाइदाजनक
विश्वकप उपविजेता क्रोएसियाविरुद्ध स्पेनले गर्यो गोलको वर्षात ! क्रोएसिया ६ गोलले पराजित !
विश्वकप किर्केट छनोट : नेपालको निकै खराब सुरुवात: यस्तो छ ताजा स्कोर